(1) Uri kutengesa kambani kana mugadziri?
Isu tiri indasitiri yekugovana uye yekutengesa yakabatanidzwa kambani, CHUANGRONG iri kutungamira kupinza uye kutumira kunze kwenyika kwemafekitori edu mashanu, uye isu tinotengesawo zvimwe zvigadzirwa zvinoenderana.
(2) Kambani yako yakavambwa rinhi?
CHUANGRONG yakavambwa muna2005.
(3)Kambani yako iripi?
CHUANGRONG iri kuChengdu rinova guta rekumusha pandas.Mafekitari edu ane muzinda kuDeyang, Sichuan, China.
(4)Ndingashanyira fekitari yako here?
Chokwadi, kana iwe uchida kushanya kufekitori yedu, ndapota taura nesu kuti tiite nguva yekusangana.
2.R & D & Dhizaini
(1) R & D yako yakakura sei?
Dhipatimendi redu reR & D rine vashandi gumi, uye vana vavo vakatora chikamu mumapurojekiti makuru ekubhidha.Uye zvakare, kambani yedu yakamisa R&D kushandira pamwe nemayunivhesiti matatu uye masangano ekutsvagisa muChina.Yedu inochinjika R & D michina uye simba rakanakisa rinogona kugutsa zvinodiwa nevatengi.
(2) Ndeupi musiyano uripo pakati pezvigadzirwa zvako muindasitiri?
Zvigadzirwa zvedu zvinonamatira kune iyo pfungwa yemhando yekutanga uye yakasarudzika tsvagiridzo nekusimudzira, uye inogutsa zvinodiwa nevatengi zvinoenderana nezvinodiwa zveakasiyana chigadzirwa maitiro.
(3)Ndezvipi zviratidzo zvehunyanzvi zvezvigadzirwa zvako?
Iyo tekinoroji zviratidzo zvezvigadzirwa zvedu zvinosanganisira chitarisiko, Elongation panguva yekuzorora, Oxidation induction nguva, Hydrostatic simba rekuyedza.Zviratidzo zviri pamusoro zvichaedzwa neWRAS, SGS kana munhu wechitatu anosarudzwa nemutengi.
(4) Unogona kugadzira madhizaini angu here?OEM kana ODM modhi?
Ehe, isu tinokwanisa kugadzira madhizaini ako.OEM neODM modhi dzinogara dzichigamuchirwa zvakare.
(1)Ndezvipi zvitupa zvaunazvo?
Kambani yedu yakawana IS09001 quality management system certification, CE, SGS, WRAS Chigadzirwa Chitupa.
(1) Ndeipi nzira yako yekutenga?
Yedu yekutenga sisitimu inotora iyo 5R musimboti wekuona iyo "mhando chaiyo" kubva ku "mupi chaiye" ne "chaiyo huwandu" hwezvinhu panguva "yakafanira" ne "mutengo chaiwo" kuchengetedza zvakajairwa kugadzira nekutengesa zviitiko.Panguva imwecheteyo, tinoyedza kudzikisa mitengo yekugadzira uye yekushambadzira kuti tiwane zvibodzwa zvedu zvekutenga nekupa: hukama hwepedyo nevashambadziri, simbisa uye kuchengetedza kuwanikwa, kuderedza mutengo wekutenga, uye kuve nechokwadi chemhando yekutenga.
Parizvino, tave tichishandira pamwe nemabhizinesi e28 kwemakore 3, kusanganisira muBorouge, Sabic, Basell, Sinopec, Petrochina, Battenfield, Haitian, Ritmo, Leister etc.
(3) Ndeipi mipimo yako yevatengesi?
Isu tinoisa kukosha kukuru kumhando, chiyero uye mukurumbira wevatengesi vedu.Isu tinotenda zvakasimba kuti hukama hwekubatana kwenguva refu huchaunza mabhenefiti enguva refu kune ese ari maviri.
(1) Ndeipi nzira yako yekugadzira?
a.Dhipatimendi rekugadzira rinogadzirisa hurongwa hwekugadzira kana wagamuchira iyo yakapihwa odha yekugadzira panguva yekutanga.
b.Mubati wezvinhu anoenda kudura kunotora zvinhu.
c.Gadzirira maturusi ebasa anoenderana.
d.Mushure mekunge zvinhu zvese zvagadzirwa, vashandi vekugadzira musangano vanotanga kugadzira.
e.Vashandi vekutonga kwemhando vachaita ongororo yemhando mushure mekunge chigadzirwa chekupedzisira chagadzirwa, uye kurongedza kunotanga kana vapfuura ongororo.
f.Mushure mekurongedza, chigadzirwa chinopinda mudura rezvigadzirwa zvakapedzwa.
(2) Yakareba sei nguva yako yakajairika yekutumira chigadzirwa?
Kune sampuli, nguva yekuendesa iri mukati memazuva mashanu ekushanda.
Pakugadzirwa kwemazhinji, nguva yekuendesa ndeye 7-15 mazuva mushure mekugamuchira dhipoziti.Nguva yekutumira ichashanda mushure mekunge ① tagamuchira dhipoziti yako, uye ② tinowana mvumo yako yekupedzisira yechigadzirwa chako.Kana nguva yedu yekuendesa isingasviki nguva yako yekupedzisira, tapota tarisa zvaunoda mukutengesa kwako.Muzviitiko zvose, tichaedza zvatinokwanisa kuti tisangane nezvido zvako.Kazhinji, tinogona kuita izvi.
(3) Iwe une MOQ yezvigadzirwa here?Kana hongu, ndeipi huwandu hwehuwandu?
MOQ yeOEM/ODM uye Stock yakaratidzwa muBasic Info.yechigadzirwa chimwe nechimwe.
(4) Ndeipi yako yakazara kugadzirwa kugona?
Isu pachedu akawanda 100 anoseta pombi kugadzirwa mitsetse iri mberi pamba uye kunze, 200 seti akakodzera kugadzirwa michina.Kukwanisa kugadzirwa kunosvika kupfuura 100 zviuru matani.Yayo hombe ine 6 masisitimu emvura, gasi, dredging, migodhi, kudiridza uye magetsi, anopfuura makumi maviri akateedzana uye anopfuura 7000 yakatarwa.
6. Zvigadzirwa &Sample
(1)Ndeipi miyero yeHDPE mapaipi uye mafittings?
Zvigadzirwa zvinoenderana ne ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130 standard, uye yakatenderwa ne ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.
(2) Ndeipi nguva yewaranti yeHDPE mapaipi uye mafittings?
Nekuda kwekushandiswa kwe100% yepakutanga mbishi, kune ese HDPE mapaipi & fittings, tinogona kupa makore makumi mashanu ewaranti yekushandisa zvakajairika.
(3)Ndeapi mamwe mapoka chaiwo ezvigadzirwa?
a.HDPE pombi yemvura, gasi, dredging, migodhi, kudiridza uye magetsi.
b.HDPE fittings yeSocket, Butt-fusion, Electro-fusion, Syphon.
d.PPR pombi & zvigadziriso.
e.PVC pombi & fittings.
f.Plastiki welding muchina weSocket, Butt-fusion, Electro-fusion.
g.Plastiki Extrusion pfuti & inopisa kupisa mweya pfuti.
(4) Ndinogona kuwana samples ndisati ndaodha?
Ehe, kazhinji isu tinokwanisa kupa samples dzepombi & yekukodzera mahara, asi iwe unofanirwa kuvhara mutengo wekutakura.
7. Kudzora kwehutano
(1) Ndeipi midziyo yekuongorora yaunayo?
Iyo kambani yakashongedzerwa nemichina yekuyedza yepamusoro uye ine rabhoritari yenyika.Murabhoritari ine Melt flow rate tester, Carbon black dispersion tester, Ash content tester, Density gradiometer uye Hydrostatic tester muchina zvichingodaro.SeProvincial technical Center, inogona kupa bvunzo kune wechitatu bato.
(2) Ndeipi nzira yako yekudzora kunaka?
Isu tine yakasimba yemhando yekudzora maitiro ezvigadzirwa uye zvigadzirwa zvakapedzwa.
(3) Zvakadini nekuteedzera kwezvinhu zvako?
Batch yega yega yezvigadzirwa inogona kuteverwa kumashure kune mutengesi, batching vashandi uye QC timu nezuva rekugadzira uye batch nhamba, kuve nechokwadi chekuti chero maitiro ekugadzira anoteedzera.
(4) Unogona here kupa magwaro akakodzera?
(5) Chii chinonzi waranti yechigadzirwa?
Isu tinovimbisa zvinhu zvedu uye hunyanzvi.Vimbiso yedu ndeyekuita kuti ugutsikane nezvigadzirwa zvedu.Pasinei nokuti pane waranti, chinangwa chekambani yedu ndechekugadzirisa nekugadzirisa matambudziko ose evatengi, kuitira kuti munhu wose agutsikane.
(1) Iwe unovimbisa zvakachengeteka uye zvakavimbika kuendesa zvigadzirwa?
Ehe, isu tinogara tichishandisa emhando yepamusoro kurongedza kutumira, yakasarudzika kurongedza uye zvisiri-yakajairwa kurongedza zvinodiwa zvinogona kuunza imwe mari.
(2) Zvakadini nemari yekutumira?
Mutengo wekutumira unoenderana nenzira yaunosarudza kuwana zvinhu.Express ndiyo nzira inokurumidza asi zvakare inodhura zvakanyanya.Nekutakura zvinhu mugungwa ndiyo yakanakisa mhinduro kune yakakura mari.Chaiyo mitengo yekutakura tinogona kukupa chete kana tichiziva ruzivo rwehuwandu, huremu uye nzira.
(3) Chiteshi chako chekutakura chiripi?
Kazhinji Ningbo, Shanghai, Dalian, Qingdao
(1) Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzinogamuchirwa dzekambani yako?
a.30% T / T dhipoziti, 70% T / T chiyero kubhadhara isati yatumirwa.
b.L / C pakuona inogamuchirwa.
c.Ali trade insurance, Paypal, Western Union, MoneyGram.
d.Dzimwe nzira dzekubhadhara dzinoenderana nehuwandu hweodha yako.
10. Musika & Brand
(1) Zvigadzirwa zvako zvakakodzera misika ipi?
Zvigadzirwa zvedu zvakanyatsokodzera chero nyika kana dunhu repasi.Yakagadzira hukama hwebhizinesi nenyika dzinopfuura makumi matanhatu uye nzvimbo mune indasitiri yehukama.
(2) Ko kambani yako ine mhando yayo?
Kambani yedu ine "CHUANGRONG" mhando.
(1) Ndeapi maturusi epamhepo ekukurukurirana aunawo?
Zvishandiso zvekambani yedu zvepamhepo zvekutaurirana zvinosanganisira Tel, Email, Whatsapp, Messenger, Skype, LinkedIn, WeChat uye QQ.
(2) Ndeipi nhamba yekunyunyuta kwako uye kero yeemail?